NgoSepthemba ngonyaka odlule. Esikhathini somdwebo we-Paris auto show. Umphakathi wanikezwa nge-hatchback emisha emihlanu yesizukulwane sesibili "Auris Toyota". Izici zezobuchwepheshe zalesi simangaliso saseJapane sezilokhu zihle kakhulu, okuqinisekiswa yimpumelelo yokuthengisa izimoto eJapane naseYurophu. Khumbula ukuthi isizukulwane sokuqala sezinhlanzi sakhiwe kusukela phakathi no-2007, kodwa okwamanje ukukhathazeka kweJapane kuhileleke ekwakhiweni kwesizukulwane sesibili se "Auris", esizoxoxa ngakho manje.
Isizukulwane esisha sabaqambi bezimoto sinikeze imidlalo yezemidlalo, manje ekhona cishe yonke imininingwane yomzimba. Ingxenyeni yangaphambili yohlu elungiswayo ihlotshiswe ngezibani ezikhanyayo zokukhanya ezikhanyayo nezibani zokuzakhela ngaphakathi ngaphakathi kwama-LED. Isithombe sezemidlalo sisekhona kumswakama wokudabuka, owathola ifomu le-muscular more futhi wathola kusuka ngaphansi "entsha lip" aerodynamic "nge trapezoidal umoya ukugqoka kanye stylish izibani bhubhe. Amathanga emoyeni nawo ashintshe ifomu lawo - manje abonakala ephinda umthamo wokukhanyisa. Futhi emotweni waba ngaphezulu kwe-chrome. Konke lokho kwamnika ngempela umdlalo nokuhlukumezeka, futhi kwabuye kwathuthukisa izici zezobuchwepheshe eziphakeme (i-Toyota Auris manje ifana nemoto yemidlalo yangempela) ngenxa yokuma komzimba okulula.
Uma kuqhathaniswa nesizukulwane sokuqala, i-Toyota Auris ebuyekeziwe izuze ukwakheka kwezinto zangaphakathi ngokuphelele. Phakathi kwemininingwane emisha okumele uyiqaphele ukutholakala kwesondo elihambayo elihle, ideshibhodi enezinhlamvu ezimbili ezinkulu nomshini webhodi ebhodini, umklamo omusha we-console yesizinda. Futhi, izinguquko nazo zathinte izihlalo - manje umugqa wokuqala wezihlalo unephrofayela ecacile, futhi ukufakwa kwensimbi enesitayela kubonakala kuyo yonke ingaphakathi. Njengoba ubude obusele besondo (260 cm), loveli yathola ingaphakathi elithe xaxa. Futhi nakuba isikhala sekhasi sikhule ngamasentimitha angu-2 nje kuphela, sisengumkhulu omkhulu wokunethezeka kwabagibeli. Ngendlela, i-trunk elandwe ngamamentimitha angu-9 manje ingakwazi ukufaka imithwalo yemoto kuze kufike ku-360 amalitha.
"I-Toyota Auris", ehloselwe imakethe yaseYurophu naseRashiya, izonikezwa emgqeni wangaphambili wezinjini. Sikhuluma ngamayunithi amabili ephethiloli - injini eyi-1.33-litre enekhono lamahhashi angu-99 kanye ne-132-horse-power engine enevolumu lama-1.599 amalitha. I-diesel eyi-1.4 litre injini ngeke isetshenziswe ngokusemthethweni eRussia. Phakathi kokudluliselwa kubalulekile ukunikeza ibhokisi elisha "umshini ozenzakalelayo" kanye "nomshini" ngezinyathelo ezingu-6. Izimpawu ezinjalo zobuchwepheshe (i-Toyota Auris emzimbeni we-hatchback) nakanjani ngeke zilahlwe.
Yebo, ngenkathi senza izindleko. Intengo encane ye-hatchback entsha ngo-2013 ingaba rubles ayizinkulungwane ezingu-734. Le ntengo ifaka injini engu-1.33-litre kanye nebhokisi lezimakethe. "I-Toyota Auris" ene injini yephethiloli enomthamo wamasentimitha angu-1599 cubic futhi ibhokisi elizenzekelayo lizobiza abathengi ama-rubli angu-815 ayizinkulungwane. Izindleko zemishini yokunethezeka zingafinyelela uphawu lwe-ruble angu-950 ayizinkulungwane.
Uma sibheka lezindleko, singasho ukuthi ukuklama nokucaciswa kweToyota Auris kuyomjabulisa umnikazi wayo nsuku zonke.
"Mercedes GLA 200 '- ezibekiweko lobuchwepheshe, ingaphakathi kanye nomklamo
Ngiyayizonda izingane zabo. Kanjani ukuphila nayo futhi yini okufanele uyenze?
Ballerinas Chanel - yinduduzo nesitayela
"The Sound kanye Ukufutheka": Mike Tyson alunywe indlebe Evander Holyfield
Indlela beveza isidlaliso "Instagram": amathiphu kanye nemibono
Amandla isiphetho - ke ... Izizathu ngekusasa nesiphetho
Uhlu lwezinhlangano endaweni ekhethekile yomnotho "Alabuga"
Mazda izimoto. Mazda 6 (GH): Ukucaciswa, incazelo, izilinganiso